Wasiirka Cusub ee Waxbarashada Puntland oo la dhaariyay – SBC
Wasiirka Cusub ee Waxbarashada Puntland oo la dhaariyay
Posted by Webmaster on June 28, 2015 Comments
Wasiirka cusub ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta-sare ee Puntland Dr. Abshir Yuusuf Ciise ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 28-6-2015 lagu dhaariyey xafiiska Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ee aqalka Madaxtooyada Puntland ee Garoowe.
Garsoore Aadan Cumar Maxamed oo katirsan Maxkamadda sare ee Puntland ayaa wasiirka cusub ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta-sare ee Puntland ku dhaariyey madaxweynaha hortiisa .
Dhaarta kadib ayaa madaxweynuhu waxaa uu Alle uga baryey wasiirka cusub in xilka uu u dhaartay uu u fududeeyo, isagoona kula dardaarmay in su hufan oo daacadnimo ku dheehantahay uguto waajibaadka shaqo ee horyaala.
‘’ Wasaaradda waxbarashadu wasaaradd shaqeysa weeye , shaqaalo fiican ayaana jooga , waxayna kamid tahay wasaaraddaha ugu wanaagsan dalka , waana halbowlihii dalka adiguna nin muddo aad u dheer waxbarasho ku soo jiray baad tahay , qof kaaaga haboon oo shaqadaan qabanaya garanmaayo ‘’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas .
‘’ Waxaa lagaa rabaa wasaaraddu meesha ay joogto inaad ka sii qaado, dadka dhalinyarada ah ee reer Puntland waxbarasho fiican oo tayo leh waa inay helaan , Insha,allah guul iyo kheyr baan kuu rajeynayaa ‘’ Ayuu hadalkiisa raaciyey Madaxweyne Gaas.
Wasiirka cusub ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Puntland Dr. Abshir Yuusuf Ciise ayaa isna dhankiisa sheegay inuu aad ugu faraxsanyahay xilka uu u magacabay Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, waxaana uu balanqaaday inuu la imaanayo howlkarnimo dheeri ah.